I-AOL Whitelist - Ungayithola kanjani iMhlophe nge-AOL
Kugunyaza i-imeyili yakho nge-AOL
NgoLwesibili, Septhemba 11, 2007 NgoLwesibili, ngoJulayi 15, i-2014 Douglas Karr
Mhlawumbe ngoba kusengenye yezinto ezinkulu kakhulu I-ISP futhi ethanda kakhulu ngama-imeyili, i-AOL inayo ngempela insizakalo enhle yePostmaster online. Bekufanele ngixhumane nabo lapho iklayenti libika ukuthi babenezinkinga nge-imeyili efinyelela kumakheli e-imeyili e-AOL. Impela sithole ukuthi amakheli we-IP wohlelo lwethu lokusebenza ayavalwa.
Lokho kuzwakala kumbi kabi, njengokungathi besikade sigaxekile noma okuthile ... kepha akusikho. Onke ama-imeyili ethu ayasebenziseka noma ayamema ngokwemvelo. Eqinisweni, awekho ama-imeyili wokumaketha aphuma kulawa makheli. Ngabiza umngani omkhulu nomkhulu wokuhambisa, uGreg Kraios, futhi wangibeka ngqo ngemininingwane yokuxhumana nabaphathi beposi be-AOL kanye ne Iwebhusayithi ye-AOL Postmaster. Ngibashayele ucingo bangazisa ukuthi yiziphi izinyathelo engingazithatha ukuze ngivuleke futhi ngiye ohlwini lwabamhlophe.
Ngithole inkinga yethu enkulu ukuthi uhlelo lwethu beluthumela kuma-akhawunti we-imeyili we-AOL ayiphutha ngokubheka kwethu kwe-Reverse DNS kukhutshaziwe. Ukubuyela emuva kwe-DNS kuyindlela ye-ISP yokubheka imininingwane yakho yesizinda neyenkampani ngekheli le-IP elivela kulo. Ngokuyicisha, sasibukeka njengogaxekile. Ngamakheli amabi anele - I-AOL inqume ukubheka ukuthi singobani. Lapho bengakwazi ukuthola ukuthi singobani, basivimba. Yenza umqondo! Ngeke ngithi ngiyabasola.
Ngemuva kokuthi sinikwe amandla i-Reverse DNS, i-AOL ilahle ibhulokhi. Ngiphinde ngakhuluma nethimba lethu lezentengiso ngabatshela ukuthi bayeke ukwenza amademo ngamakheli e-imeyili e-AOL (yibona elula ukuthayipha, akunjalo? Ngemuva kokuthi ibhulokhi isusiwe, uvunyelwe ukufaka isicelo sokugunyazwa kusayithi le-Postmaster. Ngisebenzise okungenani izikhathi eziyishumi nambili - kepha ngasheshe ngathola ukuthi amadada akho kufanele abe zilandelana ngaphambi kokukwenza:
Sinike amandla ukubuyela emuva kwe-DNS Lookup kukheli ngalinye le-IP esithumela kulo i-imeyili.
Bekufanele sisethe ikheli le-imeyili lempendulo le-AOL elizosibhalela uma kunezinkinga ze-imeyili. Silungiselele ukuhlukumeza @. Sisaqhubeka nokusetha unhlokweni we-imeyili wangokwezifiso othi “Amaphutha-Ku” kodwa lesi yisiqalo esihle.
Kwakudingeka silinde ngemuva kwezinsuku ezimbalwa sivuliwe.
Isizinda sakho kufanele sifanane nesizinda esikuxhumana nawe nakuma-imeyili wakho we-loop loop. Ungakwazi bhalisa ikheli lakho le-imeyili le-FBL nge-AOL.
Uma unezizinda ezahlukahlukene, kufanele ufake isicelo ngasinye.
Qinisekisa ukuqapha amakheli e-imeyili owathumele nawo. Uzodinga ukuthi uchofoze isixhumanisi sokuqinisekisa ngaphambi kokuthi basebenze esicelweni sakho sohlu olumhlophe.
Isinyathelo sokugcina ukulinda impendulo. Uma wenqatshwa, ungashayela abaphathi bePosi futhi ubanikeze umazisi oyisithenjwa. Lokhu kuzobavumela ukuthi basheshe bayibheke babone ukuthi yini okungahambi kahle. Okubekwe eceleni ukwenza lokhu isikhashana!
Ngibheke phambili osukwini lapho singaxosha khona la ma-imeyili kwezethu umhlinzeki wesevisi ye-imeyili system ngakho-ke akudingeki sikhathazeke ngakho! Ngilinde ukukhishwa okusemthethweni kohlelo lwabo lwe-imeyili (engisizile ukuyichaza!) Kanye nokukhula okuthile enkampanini yethu. Ngokushesha lapho singasebenzisa izinsizakalo zabo zokuletha, kungcono!
I-AOL inezinsizakalo ezinhle ze-Postmaster, kepha ngincamela ukuthi kungafanele sibekezelele ikhanda nakancane. Inothi elilodwa, uma uzibuza ukuthi ngabe anginankinga yini ngokusivimba noma inkinga eyithathayo ukusenza sigunyazwe… nakancane. Ngiyathanda ukubona inkampani iqaphile nge-SPAM futhi ibheka amakhasimende ayo.
Kuthathe imizamo embalwa ngaphambi kokuba sithole umlando othumelayo we-AOL ukuze sigunyazwe, kepha benze ngemuva kwemizamo embalwa:
Isicelo sakho sokugunyazwa, esinekhodi yokuqinisekisa ethi xxxxxxxx-xxxxxx, sivunyiwe.
Awuqinisekile ukuthi ama-imeyili akho ayavinjwa noma cha? Qiniseka ukuthi usebenzisa i Ithuluzi lokuqapha ukubekwa kwe-Inbox ukuthola nokuxazulula izinkinga eziqondene ngqo ne-ISP.
Tags: 250okI-AOLuhlu olumnyamaumphathi we-aolukugunyazwa kwe-aoli-imeyili evinjiwefblimpendulo ye-loopukubekwa kwebhokisi lokungenayoumhlinzeki wesevisi ye-inthanethiispisihlungi se-junkugaxekileizikhalazo zogaxekileisihlungi sogaxekile
Kuyini ukumaketha okusebenzisana?
Ngifisa ukuthi wonke ama-Car Sales Commercial aphele kanjena!